Coin, okhipha, Futhi Funa Machine Servicers Futhi abalungisi bethempeli Job Description / Duty Sample Futhi Imisebenzi – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Coin, okhipha, Futhi Funa Machine Servicers Futhi abalungisi bethempeli Job Description / Duty Sample Futhi Imisebenzi
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa 2 Amazwana 1,650 Ukubukwa
Usizo, entabeni, ukubuyisela imali, isidlo, noma imishini yokugembula kuhlanganise isiqophi imidlalo, amabhokisi noma slot machines Juke, noma ulungise.
Gcwalisa imishini usebenzisa izinto, imikhiqizo, izimali, kanye nezinye izinto.
Sigcine imibhalo lwezinto eyabiwe ngayo, siphinde zamadola eqoqwe.
Thola imali kanye nezindleko ezivela imikhiqizo, ukulungiselela ama-akhawunti, buyisana amarekhodi concessionaires.
Yenza yenkampani akucela steadfastly ukuhambisana futhi ubuyise amamodeli.
Izinyathelo kanye nokuhlola onobuhle ukuze ziqiniseke izimbangela ukwehluleka futhi ulungise izinkinga okuncane imikhiqizo Ngokwesibonelo abanjwe noma izindleko igcwele.
Amadivayisi kukhona luhlolo ukuze ziqiniseke yokusebenza efanele.
abasebenzi Imininingwane ukulungisa ukuthi ezinye noma izimali ngoba ukuze kususwe lakho lamadivayisi ezimweni lapho kwamaphutha ukuthi osemqoka kudingeka.
izakhi Sula namafutha imishini.
Record ukuthenga idatha ulwazi ezinhlotsheni noma izingodo, nesixwayisi abasebenzi kunikezwa ukungafani.
Alter izici imishini amandla futhi amath-.
Londoloza idatha ye kubuyiselwe futhi iyunithi ukulondolozwa.
Shintsha izakhi efanele, kuhlanganise esetshenziswa engqondweni kazibuthe ku othomathikhi imishini yokukhipha imali (ATM) amakhadi abafundi.
Shintsha futhi ubuyisele izinyathelo kanye uhlamvu, merchandising, noma imishini ukuzijabulisa futhi ushintshe izindawo efanele lobuchwepheshe kanye kagesi, isicelo ngesandla amathuluzi, yensimbi nokunamathisela ngomthofu, nemidwebo.
Zikagesi yesondlo Kwase kuzodingeka ukuba ngu izingxenye zokwazi.
amadivaysi ukuqaqa, ngokuhambisana Ukucaciswa nezandla sisebenzisa namathuluzi amandla.
Sebenzisa amadivayisi, okwenza amanzi edingekayo noxhumana nabo kagesi ekuhambisaneni usebenzisa izidingo.
Buza Izintambo zikagesi ezisobala kanye amabhuku imidvwebo ukuze abuthele ulwazi waba isidingo ukulungisa imikhiqizo.
onobuhle Ezokuthutha izifake amawebhusayithi.
Yenza intengo ukulungisa izilinganiso.
Ukufunda imisho Ulwazi-Ulwazi wadala nemisho amaphepha ezihlobene nomsebenzi.
Active-Ukulalela-Ukunikela ukunakwa okuphelele kwalokho-abantu bethi, ekuzuzeni isikhathi ukuba uqaphele izinto lakhiwa, ezibuza imibuzo njengoba elungile, futhi ungalokothi likhinyabeze ngezikhathi okungafanele.
Ukubhala-Ukuxhumana ngempumelelo ephepheni njengoba esifanele ukuswela izilaleli.
Ukukhuluma-Ukukhuluma-kwabanye ukwabelana ngolwazi kahle.
Mathematics-Lisebenzisa wezibalo ukuxazulula izinkinga.
Isayensi-Ukusebenzisa imithetho emitholampilo amasu ukulungisa izinkinga.
Ezibucayi-Thinking-Lisebenzisa ukwahlulela futhi ngacabanga ukuthi zibone izinzuzo ezinhle nobuthakathaka babantu izimpendulo enye, okutholakele noma izindlela izinkinga.
Active-Learning-Ukuqonda izinzuzo zayo ulwazi olusha oluzayo futhi yamuva okuxazulula izinkinga ekuthathweni ngamunye futhi.
Ukufunda Izindlela-Ukukhetha futhi izindlela coachingORinstructional futhi ukwelashwa buyafaneleka isimo lapho ufunda noma coaching izinto fresh.
Ihlola-TrackingPEREvaluating ukusebenza ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo, abantu ukuthi kukhona ezengeziwe, noma izinkampane athathe izinyathelo zokulungisa noma ukukhiqiza izinguquko.
abanye Social Perceptiveness-Sokwazi’ kuthambekela futhi ukwazi ukuthi kungani beziphatha ngenkathi benza.
izenzo Coordination ezidunga mayelana nabanye’ imisebenzi.
Marketing-ukuncenga abanye ukuba bashintshe noma imicabango yabo.
YezokuLamula-Ukuletha abanye bebonke nokuzama buyisana umehluko.
Ukusiza-Ukufundisa abanye indlela ncamashi ukwenza okuthile.
Izikhungo Orientation-Ngezenzo ibheka izindlela ukusekela abantu.
Inxanxathela Problemsolving-Ukuhlukanisa nezindaba esiyinkimbinkimbi kokubukeza idatha ixhunyaniswe ukuba ngakhe futhi sicabangele izindlela kanye nokuqalisa izixazululo.
Operations Ukuhlaziya-Iyahlaziya kudinga futhi ukucacisa komkhiqizo ukwenza isendlalelo.
Engineering Design-Engineering ukusiza igiya ngabanye kanye isakhiwo noma ekuqinisekiseni kudinga.
Gear amathuluzi Ukukhethwa-Ukuhlonza Nokubhekana uhlobo imishini kwakudingeka ukwenza umsebenzi.
amadivaysi Ukufakwa-Ukungeza, imikhiqizo, cabling, noma izinhlelo zokusebenza ukugcwalisa izici.
UHlelo-Ukubhala ikhompyutha amaphakheji ekusebenziseni ahlukahlukene.
Umsebenzi Tracking-Ukubona izinkomba ezahlukene, izingcingo, noma Izikali ukuze uqinisekise i imishini isebenza ngokufanele.
Umsebenzi futhi Phatha-nokusingatha imisebenzi amasu noma igiya.
Isisetshenziswa Isondlo-Kwenziwa yesondlo okungukuthi ojwayelekile imikhiqizo nokubona lapho futhi hlobo luni yokusevisa iyoba ezidingekayo.
Ukuxazulula-Ukunquma zezici ezibangela glitches ukuthi tisebenta bese ukhetha ukuthi indlela leya khona nanoma-ke.
Ukubuyisela-Ukubuyisela imishini noma amasu sisebenzisa izindlela ezidingekayo.
Quality-Control Ukuhlaziya-Kwenziwa ukuhlolwa nokuhlolisisa kwezimpahla, izinkampani, noma imisebenzi ukulinganisa ukusebenza noma kakhulu.
Buka futhi izinqumo-Ukucabanga izinzuzo izindleko jikelele izinyathelo ukuthi kukhona kungenzeka ukuba ukhethe lowo kangcono.
Systems Ukuhlaziya-Ukunquma indlela indlela kufanele usebenze nezinguquko endleleni ezimweni, imisebenzi, nasemkhathini kungathinta izinzuzo.
Systems Ukuhlaziywa Ukuthola izinyathelo noma amasignali ukusebenza futhi ngokuhlobene shaqa uhlelo, izinyathelo waba nesidingo sokwenza ngcono noma ukusebenza ezifanele.
Isikhathi Ukuphathwa-Ukulawula oneis isikhathi siqu.
Ukuphathwa Savings-Ukunquma indlela imali kungenzeka kusetshenziswe isikhathi uthole umsebenzi wenziwa, futhi yokuthengisa mayelana nala izimali.
Ukusebenza kwezinhlaka Into Izindlela-Ukubona nokuthola ukusetshenziswa efanelekayo izikhungo, igiya, futhi izinto ezidingekayo ukwenza umsebenzi othize.
Ukugada Abasebenzi Resources-Ukusungula ekhuthazayo, futhi ehola abantu ngoba babesebenza, ukukhomba abantu best for umsebenzi.
Ukuqeqeshwa Ukufaneleka Experience Isidingo
Abaningi Training School
ukuphikelela – 79.81%
Ubuholi – 88.68%
Cooperation – 89.30%
Matter Abanye – 83.92%
Umumo Komphakathi – 77.94%
Ukuzithiba – 83.98%
ingcindezi IThreshold ungayifaka – 88.00%
Ngokwezifiso / Mobility – 93.64%
nokwethembeka – 89.34%
Ukubhekisisa Ukujula – 97.59%
Ukwethembeka – 89.16%
Ukudala – 88.04%
Ukucabanga – 93.95%